Ireo kojakoja ESSENTIAL 5 ho an'ny aquarium | Ny trondro
Trondro rano mangatsiaka
Trondro Aquarium an-dranomasina
Rehefa manomboka eo amin'ny tontolon'ny aquarium ianao dia mila mahafantatra fa tsy maintsy mividy kojakoja sasany ho an'ny trondroo ianao. Tsy mividy trondro, aquarium ary rano fotsiny izany fa mila andian-dahatsoratra Extras ka mandeha tsara ny zava-drehetra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny momba azy ireo ny kojakoja tsara indrindra ho an'ny aquarium anao mba hahafantaranao tsara izay tokony ho azonao.
Raha liana te hahafantatra ny toetra sy ny fiasan'ny tsirairay amin'ireo add-ons ireo dia ity ny lahatsoranao 🙂
Torohevitra alohan'ny hividianana kojakoja
Alohan'ny maika hividy amin'ny fivarotana trondro na biby dia ilaina ny mahafantatra tsara izay ilaina. Samy hafa ny filan'ny aquarium tsirairay, na dia misy itovizany aza. Araka ny ny karazan-trondro hampahafantarinao, ny haben'ny akondro, ny zavamaniry anaty rano, Sns Mila kojakoja vitsivitsy na hafa izy ireo.
Ny zavatra voalohany tokony ho fantatra dia ny filan'ny trondro izay hananantsika ao anaty aquarium. Tsy mitovy ny manana trondro rano mangatsiaka noho ny trondron-dranomasina. Tsy mitovy koa ny manana trondro tropikaly noho ny an'ny hafa avy amin'ny rano mangatsiaka kokoa. Ny sasany mila zavamaniry tena izy ary ny sasany manana plastika haingon-trano ho afaka miaina tsara.
Ny zavatra ataon'ny olona maro rehefa miditra amin'ity tontolo ity dia ny mividy kojakoja tsy hita isa. Izany rehetra izany hampitomboana ny hatsarana. Na izany aza, maro amin'izy ireo no tsy ilaina ary hampihena ny toerana filomanosan'ny trondro, ny fotoanantsika ary, mazava ho azy, ny vola.
Ny safidy tsara indrindra raha ny fananana kojakoja dia ny fitadiavan'ny aquarium madio sy madio hatrany. Raha tsy izany, na dia manana an'io aza isika, dia toa voakarakara tsara.
Ny kojakoja tsara indrindra ho an'ny Aquarium
Manaraka izany dia hanoratra ny lisitry ny kojakoja tena ilain'ny Aquarium aho ary hanampy anao hikarakara ireo trondro. Ny ambiny amin'ireo kojakoja dia haingon-trano fotsiny ary tsy manome zavatra ilaina.
Sivana NICREW ho an'ny ...
Sivana anatiny ICA OP600 ...
Tsy misy vokatra.izy ireo dia tena ilaina amin'ny aquarium. Mila iray farafaharatsiny. Amin'izany no ahazoantsika antoka fa hitazona ny fepetra ilaina mba hijanonan'ny trondro velona. Ireo sivana Izy ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana ny rano amin'ny residues izay mamorona ary mijanona mitsingevana hatrany izany.
Ilaina ny fitazonana ny rano anaty fitoeram-trondro ho madio mba ho salama ny trondro. Izy ireo koa dia ampiasaina hanatanterahana ny sivana biolojika. Midika izany fa ny fako diavana ho bakteria izay mahasoa ny trondro.
Misy karazana sivana maro, fa amin'ny ankapobeny kosa ireo manana filtrasiôna biolojika, mekanika ary simika. Amin'ity karazana sivana ity dia ampy hihazonana ny aquarium amin'ny toe-javatra tsara.
Safidy hafa iray hafa ny mividy misaraka ireo sivana. Ity safidy ity dia lafo kokoa ary mila fikojakojana bebe kokoa. Na izany aza, manome antsika fahalalahana bebe kokoa amin'ny fisafidianana izay heverintsika fa ilaina ary afaka manolo singa iray isika raha tsy miasa intsony.
BPS Fanafanana anaty rano…
Trondro maro no mila rano mafana hanahafana ny toetrandro voajanaharin'ny toeram-ponenany tropikaly. Ireto no kojakoja ilaina raha tiantsika ho salama ny trondro. Betsaka ny karazana heaters. Ny tena atolotra dia ireo manana fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy. Amin'izany no ahafahanao misafidy ny mari-pana mety indrindra ilain'ny trondro sy hitazomana azy.
Ny lafiny tsy maintsy raisina rehefa Tsy misy vokatra.dia ny mahita fa afaka manompo amin'ny habetsaky ny rano ananan'ny aquarium misy antsika izy io. Safidy tsara foana ny mividy izay lehibe kokoa mba tsy hianjera ary tsy hanafana ny rano rehetra.
NICREW ClassicLED LED Jiro ...
BPS White / Blue LED Light ...
Ny jiro dia ampiasaina hanamboarana tara-masoandro ary manome endrika estetika tsara kokoa sy mahomby. Misy karazana jiro jiro isan-karazany. Hatramin'ny fantsom-boasary mankany amin'ny sasany izay samy hafa ny lokony, dia tarihinao sy tadin-jiro.
Ny jiro dia tsy manaraka lamina hentitra toy izany, satria resaka tsiro izany. Mba hamaritana ny hazavana ilaina dia misy lamina iray izay manondro fa mila ampiasaina izy io lumens eo amin'ny 30 litatra eo ho eo amin'ny rano.
Antony iray manan-danja amin'ny hazavana koa ny loko sy ny hamafiny. Raha manana zavamaniry anaty rano voajanahary isika, dia mila jiro manome fahazavana voajanahary. Ny haavo avo kokoa dia tsy mitovy amin'ny tara-masoandro, ka tsy dia be mpampiasa. Arakaraka ny haavon'ny hazavana no hitomboan'ny zavamaniry. Mifanohitra amin'izay kosa dia hihalava izy ireo.
Ireto no kojakoja napetraka ao anaty aquarium izay mampitombo ny fivoahan'ny rano ary, miaraka aminy, mampitombo ny androm-piainan'ny trondro sy ny zavamaniry. Ny trondro sy ny zavamaniry anaty rano dia mila haavon'ny oksizenina voarehitra ao anaty rano honenana. Miaraka amin'ny fiovan'ny rano, ny sivana ary ny zavamaniry dia azo atao tsara ny manatsara ny rano. Saingy misy fotoana izay tsy ampy ary fantatro mila aerators.
Tsotra ny asany. Misintona rivotra mankamin'ny aquarium izy ireo amin'ny fomba ahafahana mamorona miboiboika sy hetsika rano.
Ny maharatsy an'ireo fitaovana ireo dia mila fanamafisana henjana mba hiasa tsara. Ny rivotra izay tsy maintsy roahina dia tsy maintsy misoroka ny fikorontanan'ny trondro na mampiakatra ny reside mandoto ny rano.
Manome endrika haingon-trano somary haingon-trano izy ireo ary mamorona tontolo iainana mahafinaritra ny maso ary mamorona tontolo misy hatsaran-tarehy bebe kokoa.
Fitsapana ny haavon'ny rano
Fampisehoana nomerika tanana ...
Ph Meter nomerika…
Matetika ny trondro dia maty ary tsy fantatra ny antony. Na dia manana ny kojakoja voalaza etsy ambony aza ianao dia tsy maintsy fantatrao ny toetran'ny rano. Ho an'ity dia misy ny fitsapana rano.
Ny masontsivana momba ny rano toy ny sanda pH (pH), ny hamafiny (GH), ny hamafin'ny karbaona (KH), ny amonium / amoniaka (NH4 / NH3), ny nitrite (NO2), ny nitrate (NO3), ny phosphate (PO4) ary ny vy (Fe) .
Amin'ireto metatra ireto dia azontsika atao ny mahalala ny faran'ny rano ary hahafantatra raha ampy izany.
Manantena aho fa miaraka amin'ireo kojakoja ireo dia azonao atao ny manana ny aquarium amin'ny toe-javatra tonga lafatra.
Fanazavana rano anaty rano
ny Natalia Cherry hace 9 volana .
Ny mpanazava rano anaty rano dia manampy betsaka amin'ny fitazonana ny rano madio sy tsy misy izany fahatsapana ...
Ny fitsapana Aquarium dia tsy soso-kevitra ihany, fa azo raisina ho toy ny tsy maintsy atao mba hitazonana ny kalitaon'ny rano ...
CO2 ho an'ny aquarium
ny Natalia Cherry hace 10 volana .
CO2 ho an'ny aquarium dia lohahevitra iray misy potipotika betsaka ary natokana ho an'ireo mpamono ranon-drano mitaky be indrindra, satria ...
Hevitra 6 handravahana aquarium
Misy haingon-trano an-taonina izay hevitra tsara handrefesana aquarium, manomboka amin'ny vato na hazo mankany amin'ny tarehimarika mahazatra ...
Kitapo kitapo Aquarium
Ny sivana kitapo dia safidy tsara ho an'ny aquarium, lehibe na kely, ary tsy maninona na ...
Ny sivana AquaClear dia hitovy amin'ny olona rehetra izay tao amin'ny tontolo aquarium nandritra ny fotoana kelikely, satria ...
Fitaovana aquarium feno no mety hanombohana, izany hoe ho an'ireo mpankafy ny tontolon'ny trondro sy ...
Efa nilaza tamin'ny fotoana maromaro izahay fa ny tena sarotra, ary koa ny tena ilaina indrindra, amin'izao ...
Conditioner rano anaty rano
Ny famafana rano dia zavatra tena ilaina amin'ny fanadiovana ny rano izay avy hatrany amin'ny paompy ary mamadika azy ho ...
ny Natalia Cherry hace 11 volana .
Ny siphon aquarium dia iray amin'ireo fitaovana fototra ahafahana manatanteraka ny fikojakojana ny aquarium sy ...
Ny thermomère aquarium dia fitaovana fototra iray manampy amin'ny fitazonana ny mari-pana aquarium ho voafehy tanteraka. A) Eny…
Skimmer ho an'ny aquarium anao
Amazon biotope ho an'ny karazana kely